Ashabalele amathuba ngeComrades
Abagijimi abake badla ubhedu kwiComrades bebenethemba lokuthi lo mjaho uzoqhubeka ngemuva kokumenyezelwa kokuthi ngeke usaba khona ngoJuni 14 ngenxa yegciwane iCorona. Kodwa izolo ashabalele lawo mathemba uma kubikwa ukuthi sekuthathwe isinqumo esiwujuqu. Isithombe esigciniwe: Doctor Ngcobo/African News Agency (ANA)
INTATHELI YESOLEZWE | May 15, 2020
KUBE nzima ukuthatha isinqumo sokuhoxisa umjaho weComrades walo nyaka. Lawa ngamazwi ashiwo ngusihlalo weComrades Marathon Association (CMA), uCheryl Winn, izolo ngesikhathi bona nenhlangano yezokugijima kuleli i-Athletics South Africa (ASA), neKwaZulu-Natal Athletics, bememezela ukuthi ngeke usabakhona umjaho nonyaka obekuzoba ngoka-95.
Abagijimi abake badla ubhedu kwiComrades bebenethemba lokuthi lo mjaho uzoqhubeka ngemuva kokumenyezelwa kokuthi ngeke usaba khona ngoJuni 14 ngenxa yegciwane iCorona. Kodwa izolo ashabalele lawo mathemba uma kubikwa ukuthi sekuthathwe isinqumo esiwujuqu.
“Kubuhlungu futhi akumnandi kwibhodi yeCMA, i-ASA neKZNA ukuthi siphoqeleke ukuthatha lesi sinqumo. Besethemba ukuthi sizokwazi okungenani ukuthi umjaho ube sekupheleni kukaSepthemba (uma isimo sezulu sivuma), kepha akukhombisi ukuthi iCovid-19 izodamba maduze Sibe sesibheka ukuphepha nempilo yabagijimi nabo bonke abathintekayo sanquma ukuthi kulo nyaka ngeke ubekhona lo mjaho ohamba phambili ezweni,” kusho uWinn kwisitatimende.
Umengameli we-ASA, u-Aleck Skhosana uthe bakholwa wukuthi bathathe isinqumo esifanele.
“Lona umjaho onomlando ekuhlanganiseni isizwe nasekufukuleni umnotho bekungelula ukuthatha isinqumo esiwujuqu ngokushesha. Sikholwa wukuthi ngokuhlanganyela sifinyelele kwisinqumo esifanele ukuvikela impilo yabathintekayo nezakhamizi zaseNingizimu Afrika,” kusho uSkhosana.
Kuvele ukuthi bawu-2500 abagijimi bangaphandle abese befake izicelo zokugijima kulo nyaka kanti bawu-25 000 abakuleli. AbeCMA bathe abakuleli asebebhalisile ngeke babuyiselwe imali yokujoyina kodwa kuzokwenziwa izinhlelo zokuthi bathole izikhwama ezinezimfanelo zabo (goodie bags). Imininingwane ngokuthi bazokuthola kanjani isazothunyelwa. Kwabangaphandle imingenelo yabo izodluliselwa kwiComrades yonyaka ozayo noma kumjaho wango-2022.
BUKA: Zichaze abaningi izinqa zikaZodwa kwangathi uyaqala ukuziveza